Fickleness and loyalty - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Zava-mahadomelina sy tsy fivadihana
Manana fironana hamita zavatra maika aho. Toa misy fironan’ny olombelona mientanentana amin’ny zavatra iray, manenjika azy amin-kafanam-po, ary avy eo mamela azy ho reraka indray. Mitranga amiko izany amin'ny programa fanazaran-tena ataoko. Nanomboka programa gymnastika isan-karazany aho nandritra ny taona maro. Nihazakazaka sy nilalao tenisy aho tany amin’ny oniversite. Niditra tamina klioban'ny fanatanjahan-tena aho nandritra ny fotoana kelikely ary nanao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Niofana tao amin'ny efitranoko aho avy eo, teo ambany fitarihan'ny horonan-tsary fanaovana fanatanjahan-tena. Nandritra ny roa taona aho dia nandeha an-tongotra. Miofana amin'ny horonan-tsary indray aho izao ary mbola mandeha an-tongotra ihany. Indraindray aho miofana isan'andro, avy eo noho ny antony samihafa dia avelako ho herinandro vitsivitsy indray izany, dia miverina amin'izany aho ary saika tsy maintsy manomboka indray.
Indraindray maharary ara-panahy ihany koa aho. Indraindray aho misaintsaina sy manoratra ao anaty diary isan'andro, avy eo mifindra amin'ny làlana voaomana sy manadino ny diary aho. Tamin'ny fotoana hafa teo amin'ny fiainako dia namaky ny Baiboly fotsiny aho ary tsy nianatra intsony. Noraisiko ireo boky nivavaka ary avy eo natakalo boky hafa. Indraindray dia nitsahatra nivavaka nandritra ny fotoana kelikely aho ary tsy nanokatra ny Baiboliko nandritra ny fotoana kelikely.
Namely ny tenako aho tao satria nihevitra aho fa kileman-toetra izany - ary angamba izany no izy. Fantatr'Andriamanitra fa miforitra sy miforororiko aho, kanefa mbola tia ahy izy.
Taona maro lasa izay dia nanampy ahy hametraka ny lalan'ny fiainako izy - hanatona azy. Nantsoiko anarana izy mba ho iray amin'ireo zanany, hahalala azy sy ny fitiavany ary hanavotana ny zanany. Ary na mihena aza ny tsy fivadihako, dia mizotra amin'ny lalana foana aho - mankany amin'Andriamanitra.
Hoy i AW Tozer: Hamafisiko ity adidy iray ity, dia ny sitrapo lehibe izay mahatonga ny fo hibanjina an’i Jesosy mandrakizay. Eken’Andriamanitra ho safidintsika io fanapahan-kevitra io ary mihevitra ny fanelingelenana maro mampahory antsika eto amin’ity tontolo ity. Fantany fa nitarika ny fontsika ho amin’i Jesosy isika, ary afaka mahafantatra sy mampionona ny tenantsika ihany koa isika amin’ny fahafantarana fa miforona ny fahazaran’ny fanahy izay lasa karazana reflexa ara-panahy rehefa mandeha ny fotoana ka tsy misy mahalala izany. ezaka bebe kokoa avy amintsika (The Pursuit of God, p. 82).
Tsy mahafinaritra ve ny fahafantaran'Andriamanitra tsara ny maha-fon'ny fon'ny olona? Ary tsy mahafinaritra ve ny mahafantatra fa manampy antsika hitoetra amin'ny lalana tsara izy io, ary mifantoka foana amin'ny tavany? Araka ny tenin'i Tozer, raha mifantoka amin'i Jesôsy ny fontsika dia hametraka fahazarana fanahy izay hitarika antsika mivantana any amin'ny mandrakizay mandrakizay isika.
Afaka mankasitraka azy isika fa tsy mirona Andriamanitra. Mitovy ihany izy omaly sy anio ary rahampitso. Tsy toa antsika izy - tsy manao zavatra maika mihitsy izy, ary manomboka sy mijanona. Mahatoky foana izy ary mijanona amintsika foana na dia ao anatin'ny fotoan'ny tsy fahatomombanana aza.